तपाईको अनलाईन मोबाइल फोन व्यापार कसरी सुधार गर्ने - Daraz Life
तपाईको अनलाईन मोबाइल फोन व्यापार कसरी सुधार गर्ने0386
npblog April 24, 2020 7:51 PM May 18, 2020
नेपालमा मोबाइल फोन व्यवसायको सामान्यतया ठूलो बजार छ – अनलाईन र अफलाईन।मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरू सँधै सस्तो मूल्यमा राम्रो सुविधाहरूको साथ नयाँ फोनहरूको खोजीमा हुन्छन्। त्यसो भन्दै, मोबाइल फोन बेच्ने व्यवसायमा प्रवेश गर्नु पक्कै लाभदायक छ।
तर तथ्य यो छ कि तपाईले फोन बिक्री गरेर पर्याप्त प्रकारको नाफा प्राप्त गर्न त्यति सजिलो हुँदैन जुन तपाईले चाहानुहुन्छ चाहानुहुन्छ। किनकी तपाईको लागत पहिले नै उच्च हुनेछ र प्रत्येक व्यवसायले कम्तिमा पनि “ब्रेक-इभन” भेट्नु पर्छ। अवश्य पनि, सफल हुनको लागि तपाईले केही उपाय लिनुपर्नेछ र रणनीति पछ्याउनुपर्नेछ।
तपाईले गर्नु पर्ने कुरा हरु
1. क्याटलग बनाउनुहोस्
यदि तपाई मोबाईल फोन र अन्य सामानहरू बेच्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईले विभिन्न खण्डहरु बनाउनुभयो भने यसले तपाईको व्यवसायलाई मद्दत गर्दछ। तपाई फोन बनाउने कम्पनी र अन्य बिसेषताका आधारमा फोनहरु वर्गीकृत गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य फोन सम्बन्धि सामानहरूका लागि तपाई प्रकार र फोन अनुसार विभाजन गर्न सक्नुहुनेछ – उदाहरणका लागि, मोबाइल केसहरू, हेडफोनहरू, पावर बैंकहरू, मेमोरी कार्ड, र अन्य।
मूल्य निर्धारण गर्नुहोस्
यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले ग्राहकहरूको खरीद गर्ने कि नगर्ने निर्णयलाई ठाडै असर गर्दछ। यसको लागि, तपाईले आफ्नो विक्रेताबाट प्राप्त गरिरहनुभएको मूल्य र तपाईको प्रतिस्पर्धीहरूले प्रस्ताव गरिरहनु भएको मूल्य ध्यानमा राख्नुपर्नेछ। सुरुमा नाफा को मार्जिन कम राख्नु उत्तम हुन्छ। किनकी नयाँ व्यवसायको रूपमा तपाईको प्राथमिकता अधिक दृश्यता र अधिक ग्राहकहरु तान्न सक्नु हो र धेरै जसो सस्तो मूल्यहरूले नै ग्राहक बटुल्न सबै भन्दा राम्रो भूमिका खेल्दछ।
उत्पादन को तस्बिर
फोन को सहि तस्बिरहरुले ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न को लागी एक ठूलो भूमिका खेल्छ। तपाइले बेच्न खोजेको उत्पादनको धेरै तस्वीरहरू लिन आवश्यक पर्दैन, तर केहि उच्च गुणस्तर को तथा प्रष्ट तस्बिरहरु हुनुपर्छ जसले उत्पादन कस्तो देखिन्छ भनेर देखाउने हुनुपर्छ। तथ्य अनुसार सहि तस्बिरहरु नभए ग्राहक हरु फर्किन मुश्किलै छ।
उत्पादन विवरण लेख्नुहोस्
जब तपाई उत्पादनहरू अनलाईन बेच्नुहुन्छ, त्यति बेला उत्पादन वर्णनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। र यदि उत्पादनहरू मोबाइल फोनहरू हुन् भने यी उत्पादनहरूका विवरण वा वर्णनहरू अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सामान्यतः फोनका सुविधाहरू र फाइदाहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दछ। र यो पनि निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई उत्पादन विवरण वर्णन लेख्दा एस इ ओ राम्रो हुने शब्दहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ जस्तै कि mobile phone price in nepal, buy phone online in nepal.
2. भुक्तानी विधि छनौट गर्नुहोस्
जब तपाई नेपालमा मोबाइल फोन अनलाइन बेच्दै हुन्छ, तपाईले दुई मुख्य भुक्तानी विधिहरू छान्नुपर्नेछ – “क्यास अन डेलिभरी” (सीओडी) र अनलाइन भुक्तानी। “सीओडी” भुक्तानी विधि धेरै खरीददारहरूले प्रयोग गर्ने भएपनि अनलाइन भुक्तानी को विकल्प राख्नु पनि महत्वपुर्ण छ।
3. लचक शिपिंग वा ढुवानी
ई-वाणिज्य वा अनलाईन शपिंगमा शिपिंग लचिलो हुनुपर्दछ तर यदि तपाईले निश्चित क्षेत्रमा डेलिभर गर्नुहुन्न भने त्यसबारे ग्राहक लाई सचेत बनाउन पर्छ। ग्राहकहरुको समान को शिपिंग प्रगतिको बारेमा उनीहरूलाई सूचित गर्दै र अनुमानित वितरण समय पनि बताउनुपर्छ। तपाइँले निश्चित रकम भन्दा माथिका अर्डरहरूको लागि नि: शुल्क शिपिंग दिन सक्नुहुनेछ – यसले धेरै अनलाइन खरीददारहरू आकर्षित गर्ने निश्चित छ।
4. अनलाईन स्टोर को इन्टरनेट ट्राफिक वृद्धि गर्नुहोस्
इन्टरनेट ट्राफिक मतलब तपाईको अनलाईन स्टोर मा अनलाईन ग्राहक हरुको घुइचो। ग्राहक आकर्षित गर्न तपाईको स्टोरमा उत्कृष्ट उत्पादनहरू मार्फत मात्र भएर हुन्न।
तपाईको अनलाईन स्टोर को इन्टरनेट ट्राफिक मा वृद्धि गर्नु तल दिएका कुरा हरुमा ध्यान दिनुहोस्:
सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन वा एसईओ (SEO)
एसईओ एस्तो तरिका हरु जसमा तपाइले तपाइको अनलाईन पसल मा गूगल जस्ता सर्च इन्जिन मा प्रदर्शन गरि ग्राहक लिएर आउन सक्नुहुन्छ। रणनीतिक रूपमा “कि वर्ड” अर्थात एसईओ अन्नुकुल शब्दहरु प्रयोग गरि तपाइले गूगल जस्ता सर्च ईन्जिनमा आफ्नो पसल लाई गूगल को पहिलो पृष्ठ मा प्रदर्शन गर्न सके ग्राहक हरु धेरै आफ्नो पसल मा लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यो समय लग्न सक्ने भएकोले हरेक उत्पादन विवरण तथा आफ्नो पसल को बारेमा लेख्दा सईओ अन्नुकुल शब्दहरु प्रयोग गर्नुहोस् ।
कन्टेन्ट मार्केटिंग भनेको सम्भावित खरीददारहरूको चासो जगाउन तपाइको अनलाईन पसल तथा तपाइले बेचिरहेको उत्पादन र अन्य तपाइको पसल संग सम्बन्धित जानकारीमूलक ब्लग वा लेख लेखेर गरिने मार्केटिंग हो। तपाईको स्टोर बारेको ब्लग वा लेख मा आफ्नो पसल को लिंक र बेचिरहेको समान हरुको लिंक हल्नुहोस जसले ब्ल्गबाट ​​पनी स्टोरमा ट्राफिक लिएर आउन सकिन्छ। कन्टेन्ट मार्केटिंग तपाईको ब्रान्ड को दृश्यता बढाउन एकदम उत्तम तरीका हो।
यी विधिहरू प्रयोग गरेर, तपाईले निश्चित रूपमा तपाईको अनलाइन मोबाइल स्टोरबाट अधिक बिक्री उत्पादनको संभावना सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
Previous ArticleHow to Improve Your Mobile Phone Business OnlineNext ArticleTake the Quiz and We’ll Tell What kind ofaperson are you?